जयदेव गौतम – मझेरी डट कम
लेखन आफैँमा एक स्वतन्त्र विषय हो । लेखकको रुचि र स्वभाव अनुसार लेखन सार्वजनिक हुँदै जाने कुरा हो ।
‘मलाई ‘गुरु’ होइन, ‘सर’ भन्ने गर्नुस् । मलाई ‘सर’ भनेको नै मन पर्छ,’ उहाँ सोझै हामीसित भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।
नेपाल साप्ताहिक ४४२जीवनमा कहिलेकाहीँ विगतका घटना वा आइलागेका प्रसंगहरू स्मृतिपटलबाट हट्दा रहेनछन्, बिर्सिइँदा पनि रहेनछन् । हामी ती घटना वा प्रसंगहरूको सम्झना गरौँ नगरौँ तर ती मानौँ यादहरूको भुमरी बनेर हामीभित्रै पत्र-पत्रजस्तो टाँसिएर बसेका हुँदा रहेछन् ।
महाकविको ‘भूमिकालेखक’ व्यक्तित्व
जम्माजम्मी पचास वर्ष बाँचेका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका एक त्यस्ता पात्र हुन्, जसको बारेमा सबैभन्दा धेरै लेखिएको छ, सबैभन्दा धेरै बोलिएको छ, सबैभन्दा धेरै पढिएको छ र सबैभन्दा धेरै चर्चा गरिएको छ । उनको बहुआयामिक व्यक्तित्वको विशालता कस्तो छ भने उनी सधैँ सबैका लागि अध्ययन, विश्लेषण, अनुसन्धान र खोजका शाश्वत विषय बनेर रहेका छन् । सम्भवतः यही कारण होला, उनको सन्दर्भमा एउटै मानक स्थापित गर्नै सकिँदैन । यसै सन्दर्भमा बजारमा हालै एउटा पुस्तक आएको छ- ‘महाकविका भूमिका’ ।
सुदूर जिल्ला दार्चुलाको टुँडिखेलमा एउटा दुई दिवसीय कार्यक्रममा म पनि उपस्थित छु । राजधानीबाट गएका अरू केही साथी मसितै छन् । कार्यक्रममा दर्शक बनेका सयौं स्थानीय जनहरूमध्ये दुइटी किशोरी हाम्रो नजिक आइपुग्छन् । दुवै जना आफ्नो किशोरवयलाई छोडेर तरुणाइको मनमोहक सङ्घारमा उभिएका छन्, जुन कुरा उनीहरूको शारीरिक अवस्थाबाटै लख काट्न सकिन्छ ।
चामल र चमेली
दुई कुरा (चामल र चमेली)मध्ये कुनै एक रोज्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो भने निश्चित तवरले मेरो रोजाइ हुनेछ, चामल । यसरी रोज्दा म तलमाथि वा देब्रे-दाहिने अरू केही सोच्दिनँ, सायद मेरो मस्तिष्कले त्वरति सोच बनाइसकेको हुन्छ । किनभने, म चामलमा सार देख्छु र चमेलीमा फगत रूप मात्र । सार भनेको गुदी हो, गुण हो, गुणवत्ता हो, प्राकृतिकता हो र अन्तरतम हो ।
जब वर्षा हुन्छ, आकाश रुन्छ । जब झरी लाग्छ, आकाश बिरामी हुन्छ । जब घाम लाग्छ, आकाश हाँस्छ । जब हुस्सु र कुहिरो आउँछ, आकाशले लाजको घुम्टो ओढ्छ, सूर्य पनि कुहिरोमा लुटपुटिन्छ र पृथ्वीवासीलाई आफ्नो तेज प्रकाश दिन निकैबेरसम्म कसरत गर्न विवश हुन पुग्छ तर जब पूर्णचन्द्र उदाउँछ, आकाश दङ्गिन्छ ।
रहर नै नभएको, कुनै रहर नै नपाल्ने मानिस संसारमा कोही होला कि ? केही रहर नबोक्ने, कस्तै रहर नसाँच्ने, कत्ति पनि रहर नपाल्ने, कहिल्यै नरहराउने मानिस कोही होला कि ? यस्तो रुमानी कल्पनामा हठात् डुबुल्की मार्दा पनि मन पुलकित भएर आउँछ, हृदय रोमाञ्चित भएर जाग्छ । किनभने जम्माजम्मी तीन अक्षर मिलेर बनेको रहर शब्द उच्चारण गर्दा जति मीठो लाग्छ, सुन्दा उत्ति नै प्यारो अनुभूत हुन्छ । यो आफैँमा सरल छ, सपाट छ, सुस्पष्ट छ ।